पुष २६, २०७४ / ईटहरी: अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा पक्राउ परि अदालतमा वयान दिने क्रममा डा गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुली एसएलसी अनुतिर्ण रहेको खुलासा गरेका छन् ।
डा केसीले प्रधानन्यायाधिश पराजुलीको शैक्षिक योग्यता माथि प्रश्न उठाउदै भने, ‘उहाँले एसएलसी पास गर्नुभएको छैन। एसएलसी नै पास नगरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश कसरी हुन सक्छ ? त्यसमाथि पनि छानबिन भई कारवाही हुनुपर्छ।’
उनले पराजुलीसँग दुईवटा नागरिकता रहेको पनि दावी गरे । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका दुईवटा नागरिकता छन्। उहाँले उमेर सच्चाएर नागरिकता लिनु भएको छ।’ संविधान र कानुनले एउटै व्यक्तिलाई दुईवटा नागरिकता बोक्ने अधिकार व्यवस्था नभएको स्मरण गराउदै उनले भने, ‘कुनै पनि नागरिकले दुईवटा नागरिक बोक्न पाउँदैन। त्यसो गर्नु आपराधिक कार्य हो, उहाँले आपराधिक काम गर्नुभएको छ। त्यस्तो आपराधिक काम गर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन सक्दैन, उहाँले तुरुन्त राजिनामा दिनु पर्छ। उहाँमाथि कारवाही हुनुपर्छ ।’
डा केसीले बयान दिने क्रममा भने, ‘मेरो अदालतप्रति धेरै नै निष्ठा छ। मैले अदालतको अपमान गरेको छैन। पराजुलीले गरेका निर्णय र कार्यहरुले नै न्यायापालिकको उल्टै मानमर्दन गरेका कारणले त्यसविरुद्ध विशेष सचेत नागरिकको हैसियतले मैले आवाज उठाएको मात्र हो।
त्यसैगरी सर्वोच्चका अन्य बेतिथि र गोपाल पराजुलीको कार्यप्रति टीप्पणी गर्दै केसीले बहालवाला रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीलाई छ महिनाको समायवधिमा तीनपटक प्रमोसन गरिएको पनि वताए । त्यो कुन काननुले अनुमाति दियो ? ‘रुल अफ ल’को अध्ययन भएको भएन, त्यस विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ। त्यसबारे जानकारी पनि पाउँ ? उहाँले गरेका विभिन्न कामले पनि अदालतको अवहेलना गरेको छ। उहाँमाथि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कारवाही होस्।